BaHuThuTaGabar - Page 318 of 400 - Welcome to Bahuthutagabar
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလို အစားလျော့စရာမလိုပဲ ဗိုက်ချပ်အောင်ပြုလုပ်နည်း(ကိုယ်တွေ့)
ဒီနည်းလမ်းလေးက ယုမွန် ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးထဲကတစ်ခုပါ။ဟိုးအရင်က ပေါင်ချိန် ၁၄၅ပေါင်ရှိခဲ့ဖူးတယ် အရပ်က ၅ပေ၇ဆိုပေမဲ့ အဲ့ပေါင်ချိန်နဲ့က ဝတဲ့ဘက်မှာ ရောက်နေတာပေါ့။ပိုဆိုးတာက ဗိုက်ပူတာပါ။ဝိတ်ချလိုက်တာ ပေါင်၁၀၀ဘဲရှိတော့တဲ့အထိပါ။ခုတော့ ၁၂၂ပေါင်ပါ ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဝလာဝလာ ဗိုက်မပူလာတော့ဘူး။တကယ်ထိရောက်တဲ့နည်းလေးပါ။အစားရှောင်စရာမလိုပါဘူးနော် သေချာပုံမှန်လေးလုပ်သွားရင် ဗိုက်ချပ်ပြီး ခါးသေးစေပါတယ်။Gymဆော့ဖို့လည်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေ အစားလည်းမရှောင်နိုင်တဲ့သူတွေ အဆီကျဆေးတွေ မသောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့နည်းပါလမ်းလေးပါ မနက်အိပ်ရာထထချင်းမှာ […]
လက်ရှိချစ်သူလေးနဲ့ အတိတ်ဘဝက ရေစက်ပါ ၊ မပါ ဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက်
လက်ရှိချစ်သူလေးနဲ့ အတိတ်ဘဝက ရေစက်ပါ ၊ မပါ ဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက် ရေစက်သာပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံရသလုိုပဲ ရေစက်မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ်ဆုိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြမှာပါ။ လူတုိုင်းကရေစက်ပါလုို့တွေ့ဆုံကြသလုိုပဲ ကုိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆုိုတာ လည်း အတိတ်ဘ၀ကဆုံဖူး ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဆုတောင်းတွေကြောင့် အခုဘ၀မှာလက်တွဲ ဖော်အနေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တယ်လုို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ […]
မမ ဝဝကိတ်ကိတ် လေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းတရားလေးများ
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းက အမြင်တွေပြောင်းလဲပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားပြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လက်တွဲသွားဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ လူတိုင်းက “ချစ်ခရီးလမ်းမှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေထိုင်သွား ကြလေသတည်း” လို့ အိပ်ရာဝင် နတ်သမီး ပုံပြင်တွေထဲကအတိုင်း စိတ်ကူးရှိကြပါတယ်။ဒီအတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝဝကစ်ကစ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမဝဝတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား တွေက ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို […]
ခေါင်းကိုက်တာကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ခေါင်းကိုက်တာက တော်တော် များ များကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပါ။ ခေါင်းကိုက်တာ ဝေဒနာကြီးကြီး မားမားမဟုတ်ပေမဲ့ နေ့စဉ်အလုပ် တွေမှာ တော့ တော်တော်လေးထိခိုက်စေနိုင်ပါ တယ်။ တစ်ခါတလေမှာဆိုရင် ခေါင်း ကိုက်တာကြောင့် နေရထိုင်ရမအီမသာ ဖြစ်တာ၊ အော့အန်တာမျိုးတွေထိတောင် ဖြစ်တတ် ပါသေးတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာကို အ များဆုံး ဖြစ် […]
ရုပ်ရည်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ စန်းပွင့်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ !
ရုပ်ရည်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ စန်းပွင့်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ! အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရုပ်ရည်ရူပကာယ သာမာန်သာရှိပေမယ့် လူမှုရေးနဲ့ အချစ်ရေး နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင် ကြပါတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီလူတွေမှာ ဘာအရည်အချည်းတွေ ရှိသလဲလို့ လေ့လာလိုက်တဲ့ အခါမှာ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို သွားတွေ့ပါတယ်။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါ လူမှုရေးနဲ့ […]
ဟာသသရုပ်​​ဆောင်​ ကင်း​ကောင်​ ကွယ်​လွန်…
ရုပ်​ရှင်​နှင့်​ဟာသ ဗီဒီယိုသရုပ်​​ဆောင်​ ကင်း​ကောင်​ယ​နေ့​သေဆုံးသွားသည်​ ဟု သရုပ်​​ဆောင်​ ဇာဂနာရဲ့ လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာမှာတင်​ထားခဲ့တာ​တွေ့ရပါတယ် လက်​ရှိအချိန်​မှာ​တော့မည်​သည့်​အ​ကြောင်း​ကြောင့်​ကွယ်​လွန်​သွားသည်​ကို မသိရ​သေးပဲ အကုန်​သိ သတင်းဌာနမှ သရုပ်​​ဆောင်​ဇာဂနာကို​မေးမြန်းရာမှာ​တော့ “ဟုတ်​ပါတယ်​။ အ​ရှည်​ကြီး ဆုံးသွာတာပါ “ဟုလည်းအတည်​ပြု​ပြောကြားခဲ့သည် ​ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ရုပျ​ရှငျ​နှငျ့​ဟာသ ဗီဒီယိုသရုပျ​​ဆောငျ​ ကငျး​ကောငျ​ယ​နေ့​သဆေုံးသှားသညျ​ […]
လက်ရှိဘ၀မှာ မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်တဲ့နည်း…
မိဘကျေးဇူးဆပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘုရား အဆုံးအမကို ပြောကြပြီဆိုရင် ” မိဘကျေးဇူးကို ဘယ်လိုမှ ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး” လို့ လူအများ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်။အမှန်က “ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး”လို့ ဟောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေအောင် ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။လွယ်လွယ်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိုင်ဘူး။သာမန်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိင်ဘူး။အထူးဆပ်မှ ကျေးဇူးကျေနိုင်တယ် လို့ […]
“ပေါင်းဖက်ရန် အသင့်တော်ဆုံး အိမ်ထောင်ဖက်နေ့နံများ”
ဦး သာ စိန် ပန်း ဒန်းလှကိုရှာ ဦး-သာ တနင်္ဂနွေနှင့်သောကြာအိမ်ထောင်ဖက် စိန်-ပန်း အင်္ဂါနှင့်ကြာသပတေးအိမ်ထောင်ဖက် ဒန်း-လှ စနေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး အိမ် ထောင်ဖက် ကို-ရှာ တနင်္လာနှင့် ရာဟု အိမ်ထောင်ဖက် အိမ်ထောင်ရန်ဖက် ဓမ္မာ၊ သောက ၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ ဓ […]
အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားကြပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါမှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ […]
ဈေး အစ ဇာတ် အလယ် ဖာ အဆုံး….
“ဈေး အစ” “ဇာတ် အလယ်” “ဖာ အဆုံး” ဒီစကားလေးက မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရင်ကို တခုခုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။ ဖာ ဆိုသောစကားက အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွထွက်နေသောစကားဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ရင်ထဲတွင်ဖာဆိုသောစကားကြားသည်နှင့်ယုတ်ညံ့သောစကားဟု ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအတွေးနှင့်အတု စကားတစ်ခုကိုလည်း ရိုင်းပြသည်ဟု ထင်ပါလိမ့်မည်။ ”ဈေးအစ ဇာတ်အလယ် ဖာအဆုံး” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးသူမတို့၏ အချိန်ကာလနှင့် […]
« 1 … 317 318 319 … 400 »